Home Wararka Farmajo Waa “Wadani” waa Dembi Qaran oo Diinta, Dadka Iyo Dalka...
Farmajo Waa “Wadani” waa Dembi Qaran oo Diinta, Dadka Iyo Dalka Laga galayo.
Baraha bulshada qaarkood ayaad ku arkeysaa qoraallo lagu amaanayo M. Farmajo oo lagu sheegayo inuu yahay waddani dalka iyo dadka Somaliyeed uu jecel yahay iyaguna ay jecel yihiin, laakiin waxaad arkeysaa in qoraalladaas uu hal qof wada qoray oo ay yihiin dacaayad lacag lagu cunay, laakiin lagu qeybiyey magacyo kala duwan. Waxaa loo sameeyey baro kala duwan oo u badan Facebook, kuwaas oo loo bixiyey magacyo kala duwan, iyadoo la isticmaalayo sim cards (lafo) kala duwan oo inta telfoonka laga bixiyo mid kale gelinayo.
Marka aad qoraal aragtid waxaad fiirisaa saacadda la qeybiyey iyo magaca lagu qeybiyey inta qof saaxiibka la ah, waxaad arkeysaa in qoraalka uu hal mar soo wada galin, waana qaabka ay u shaqeeyaan CBB oo uu madax u yahay K/S Agaasimah madaxtooyada Cabdinuur oo ah madaxada CBB iyo ninka loo soo marsiiyo lacagaha.
Dhab ahaan dadkaas midkoodna ma yaqaanno qeexidda waddani iyo macnaha ay xambaarsan tahay. Waddaaniyadda waa astaan iyo halbeeg la saaro qofka oo iyada la waafaqaa ee qofka lama waafaqo, sidaas darted waxaa waddani la yiraahdaa qofka leh astaamahaas.
Farmajo ma laha hal astaan oo waddaninimo lagu sheegi karo, waxaasa uu leeyahay labaatameeyo astaamood oo waddaniyadda lid ku ah. Marka dadka ku sheegaya inuu waddani yahay laba koox ayey mid yihiin.
Kuwa qaata lacago joogto ah sida siyaasiyiin, Xildhibaanno, culimo ku sheeg diinta gata iyo aqoonyahan ku sheeg isu garabsada in dalka la dhibaateeyo si tartiib tartiib ah.
Qofka waddani ku sheegayaa Farmajo inuusan qofkaas waddani aqoon iyo waxa looga qiyaas qaato waddanimada oo u baahan cabir dhab ah.
Ama inuu yahay Khaa’in dalka khiyaanaya dadkana marin habaabinaya kuwaan oo iyagana aad u badan.
Farmajo waddaniyadda iyo diinta isku meel ayuu ka joogaa malaha hal astaan oo diini ah iyo hal astaan oo waddaniyad ah. Waayo waxyaabo badan oo labadaba ay qofkeeda ka reebayaan ayaa u bannaan Farmajo oo u caado ah Farmajo. Tusaale Farmajo waa beenlow diinta iyo waddaniyadda waa ka xaaraan beenta, rabbina been looma sheegi karo, shacbigana been looma sheegi karo. Farmajo waa munaafaq wax buu kugula heshiinayaa iyadoo aysan dhab ka ahayn ee uu waqti iyo marxalad kale oo uu dhulka kugula gooyo uu ku sugayo.
Marka cidda waddani ku sheegeysaa haddii ay aqoon darro ka tahay hadda dib ha u fiiriso afartii sano ee uu nala joogay waxa uu khariibay iyo Meesha uu dalka u celiyey.
Cidda og inuu khaa’in beenlow aan waddani ahayn yahay, balsa ku taageereysa dhaqaale ama jagooyin ay ka hesho ha ogaadeen adduun iyo aakhiro waa kala badan yihiin, munaafaq aad codkaaga ummadda ugu dul haysay waa lagu weydiinayaa waana laguu ciqaabi doonaa.
Wadaadada hunguri wado ee beenta idiin fadwoonayaa berri dhinaca kuu gali maayaan ee hadda ka tasho oo si fiican u xisaabtan.
Farmajo waxaa uu sheegtaa:
Inuu ciidanka dhisay aaway ciidanka qaran ee uu dhisay waa kooxo aan aragti waddaniyeed lahayn oo waddada Maka Al Mukarama la wadaaga Shaabaab oo la siiyey magacyo runtii qiimo leh sida Gorgor, Duufaan, Haramcad iwm. Laakiin kuwaan maaha magacyo ciidanka huwan ka tarjumaya ee magacyo la dilay oo qiimahoodii la iibsadaya.
Deyn cafin ayuu intaas sheeganayey aaway deynta la cafiyey? Aaway Wasiir BB oo markii ay xaajada soo dhawaatay weelkiisana u buuxsamay iska aamusay sida Dubbe oo markii uu dalka Afkiisa ku halligay iskaga noqday UK.
Wuxuu sheegtaa inuu soo celiyey waddaniyad, Ma in Afawerki iyo Abiy (Amxaar) ay noo taliyaan ayaa waddaniyad ah?
Runtii waa kuu foolxumo iyo ceeb maanta inaad Farmajo ku sheegeyso waddani adigoo og ruuxa uu yahay. Ma sheegin dembiyada uu galay oo lagu maxkamadeyn doonto haddii uu mowd ka badbaado.
Muuqaaladaan hoose daawo haddii aad waddaniyada u taqaan inuu shalay isku dilay reerkiisa Gedo deggan iyo hadda oo uu markale isku diray reerka deggan Balanble iyo Ciidankii uu dhisay oo dariiqyada Xamar iksu baacsanaya halkii ay shabaab iska celin lahaayeen.